युवा उम्मेदवार अनिल शर्मा को हुन् ? – || koselinews.com ||
युवा उम्मेदवार अनिल शर्मा को हुन् ?
November 10, 2017 Loksari kunwar News, Politics 0
काठमाडौं, २३ कार्तिक । वर्तमान विकृत राजनीतिमा पैसा र शक्तिका आधारमा ठूला–साना नेताको पगरि गुथाइन्छ । र त्यसैगरि प्रचार पनि गरिन्छ । तर राजनीतिभित्रको सत्यता खोतल्ने हो भने साना भनेर हेपिएका राजनीतिक कार्यकर्ताभित्रको आर्दश, इमान्दारिता र क्षमता ठूला–ठूला भनिएको नेताहरू भन्दा निकै गुणा धेरै र अगाडी हुन्छ । त्यसैमध्येका एक हुन् काठमाडौंको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ का अनिल शर्मा ।
माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीका लोकप्रिय नेता अनिल शर्मा उमेरले ३५ पनि काटेका छैनन् तर, सोंचले निकै खारिएका छन् । ‘विकास गर्नलाई बिरासत र ठूलो प्रोफाइल चाइने होइन सोंच र प्लान चाइने हो त्यो म राम्रोसँग गर्न सक्छु,’ शर्माले भने ।
रुकुम जिल्लाको सङ्गठन विस्तार, स्थानीय चुनावमा रुकुमको सफलतादेखि उज्यालो अभियानको प्लानिङसम्मको जस पाएका शर्मा व्यवस्थापनमा निकै माहिर मानिन्छन । कम बोल्ने तर धेरै काम गर्ने स्वभावका शर्मा युवाहरूमाझ अत्यन्त लोकप्रिय छन् ।
काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रबिन्द्र मिश्र, नेपाली कांग्रेस विपीका नेता हरिबोल भट्टराई र नयाँ शक्ति पार्टीका नारायाण ढकाल पनि सोही क्षेत्रबाट चुनाव लड्दै छन् । रविन्द्र मिश्रको खासै सङ्गठन छैन तर केही मतदाताहरू उनीप्रति आकर्षित छन्, भने प्रकाशमान सिंह पटक–पटक यहाँबाट चुनाव जितेर पार्टी र संसदमा राज गरिरहे पनि विकासको काम पटक्कै देखिँदैन् ।
प्रकाशमान सिंहप्रति लक्षित गर्दै शर्माले जनताको मतले बिजयी भएकाहरू कहिल्यै जनताको बीचमा जान नसकेकाले जनताको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । संक्षिप्त कुराकानीमा शर्माले भने, ‘जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधीहरू जनताको समस्याप्रति बेखवर हुँदा मतदाताहरूमा निरासा छाएको भन्दै आफू सधै जनताको साथमा रहने प्रतिबद्वता व्यक्त गरे ।’
बुबा स्कन्द शर्मा र आमा नर्मदा शर्माकी कान्छा छोरा हुन् अनिल कुमार शर्मा । अनिल कुमार शर्मा, २०३९÷०२÷१० गते रुकुममा जन्मिएका हुन् । बुबा स्कन्द शर्मा रुकुममा कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापक जिल्ला कमिटी सदस्य समेत हुन् । गाउँकै स्कुलबाट एसएलसी पास गरेका शर्मा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व गर्दै काठमाडौं आएका हुन् । राजनीतिशास्त्र र पत्रकारितामा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका शर्मा हाल काठमाडौं महानगरपालिका–१० स्थित थापागाँउ, बानेश्वरमा बस्दै आएका छन् ।
२०४८ सालमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको बाल संगठनमा आबद्ध भएर राजनीति सुरुवात गरेका जुजारु शर्मा अखिल क्रान्तिकारीले सञ्चालन गरेको जिल्लास्तरिय कार्यक्रममा निकै सहभागि हुन्थे ।
२०५३ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीको पार्टी सदस्यता लिएसँगै पूर्णकालिन राजनीति जीवनको प्रारम्भ गरेका शर्माले अखिल क्रान्तिकारी रुकुमको जिल्ला सदस्य हुँदै जिल्ला सहसचिव र जिल्ला अध्यक्षको समेत कुशल नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्यका नायक जनार्दन शर्माका सहोदर भाई अनिल शर्मा उज्यालो नेपालका अभियान्ता समेत हुन् । दाजु ऊर्जामन्त्री हुँदा शर्मा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि दिनरात खटिएका थिए । अकल्पनिय लोडसेडिङ अन्त्यका लागि ।
विद्यार्थीकोे नेतृत्व तहमा हुँदा उनको योजनामा अखिल (क्रान्तिकारी) ले प्लस २ मा ५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान शर्माले नै गरेका हुन् । साथै नीजि विद्यालयमा माध्यामिक तहमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन गराउने आन्दोलनको नेतृत्व समेत शर्माले गरेका थिए ।
सर्वाजानिक यातायात तथा विद्यार्थीले विभिन्न क्षेत्रमा सुरुमा ३३ प्रतिशत रहेको छुटलाई ४५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने आन्दोलनको कुशलतापुर्वक नेतृत्व गर्दै सफलतामा पुर्याएका थिए ।
कुरामा भन्दा काममा विश्वास गर्ने उनको दृष्टिकोणलाई अखिल (क्रान्तिकारी) मा अहिले पनि उत्तिकै आदर्श र प्रेरणादायी नेतृत्वको रुपमा विद्यार्थीले सम्झने गरेका छन् ।
अग्रसर सहकारी संस्थापक, अग्रसर सहकारी संस्थापक सल्लाहकार, नेपाल विकास समाज काठमाडौंको अध्यक्ष, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) उपत्यका अध्यक्ष, इन्चार्ज नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली युवा नेताको रुपमा परिचित शर्मा छन् ।
उच्च अदालतले भन्यो, ‘सेवाग्राहीलाई आकस्मिक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित नगर्नु’